Looking for Program Assistant to be based in Lashio, Northern Shan State – Impact Hub Yangon
Impact Hub Yangon မှ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် Program Assistant (Paid Intership) တစ်ဦးအား ရှာဖွေနေပါသည်။
GIZ (SENS) သည် Impact Hub Yangon နှင့် ပူးပေါင်းကာ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများက စုပေါင်းလုပ်ကိုင်မည့် အသေးစား အိမ်တွင်းမှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ပေးခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရုံသာမက စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအများစုမှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်သည့်အတွက် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် အိမ်တွင်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဟု SENS က ယုံကြည်ပါသည်။
Impact Hub Yangon စီမံခန့်ခွဲမှုအသင်းနှင့် ပူးပေါင်းကာ အောက်ပါ အလုပ်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
-Impact Hub Yangon၊ SENS နှင့် Project တွင် ပါဝင်သည့်သူများ အားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
-Program ၏ လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည့် သင်တန်းသားများအတွက် logistic ပိုင်းဆိုင်ရာ စီစဉ်မှုများ၊ အသေးစား စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်ရန် ကြိုတင်ရက်ချိန်းယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
-စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများအတွက် လိုအပ်သည်များကို ကူညီ ပြင်ဆင်ပေးရမည်။
-ပရောဂျက်နှင့် လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးအတွက် လိုအပ်မည့် အရာများကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ကူညီပေးရမည်။
-ပရောဂျက် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို သေချာစွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
-စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် Operation Lead မှ ပေးအပ်သည့် အလုပ်တာဝန်များ ဥပမာ – သင်တန်းသားများကို ဆက်သွယ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
-ကုန်ကြမ်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများ စသည့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်များ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမှူးကွပ်ကဲရမည်။
-သင်တန်းသားများအနေဖြင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသည့် ထုတ်လုပ်မှု အစီအစဉ်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေချာစွာ လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်စေရန် ကြီးမှူးကွပ်ကဲပေးရမည်။
-IHY Management Teamကို စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ ပြန်လည် ရှင်းလင်းတင်ပြရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ အားလုံးကို သေချာစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
-ဘွဲ့ရခါစသူများ၊ ဒီပလိုမာရရှိထားသူများ၊ ဘွဲ့ကြို ကျောင်းသားများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
-Microsoft office နှင့် G-suite ကို အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
-ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ၊ စာနာစိတ်နှင့် ပြည့်စုံပြီး ယုံကြည်ထိုက်သောသူ ဖြစ်ရမည်။
-စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားပါက ပိုကောင်းသည်။
-အချိန်ကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
-လားရှိုးမြို့အနီးတဝိုက်ကို သွားလာနိုင်ရမည်။ (မြို့ထဲမှ ၁၅ မိနစ်ခန့် ကားမောင်းရသည်။ ) မိမိအစီအစဉ်နှင့် သွားလာနိုင်ပါက ပိုအဆင်ပြေပါသည်။ (ဆီဖိုးကို ပြန်လည်ပေးမည်ဖြစ်သည်။)
လျှောက်ထားလိုပါက ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ မတိုင်မီ bhonemyat.kyaw@impacthub.net သို့မဟုတ် aung.pyae@impacthub.net သို့ CV Form ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သိရှိလိုသည်များ ရှိပါက ၀၉ ၉၇၃၄၇၄၁၄၁ သို့မဟုတ် ၀၉၇၆၁၀၉၃၃၁၈ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Impact Hub Yangon is looking for Program Assistant (Paid Internship) to be based in Lashio, Northern Shan State.
GIZ (SENS) in collaboration with Impact Hub Yangon organization, would like to provide food related skills training together withasmall food production facility to help the IDPs as well as to fill the needs of the agriculture sector by establishingasustainable micro food cottage business run byagroup of IDPs. As the majority of IDPs are women, SENS believes that would create women led micro food cottage businesses and job opportunities around it.
Candidate must coordinate with Impact Hub Yangon management team will undertake following duties and responsibilities:
-Support in the coordination with stakeholders, Impact Hub Yangon and SENs.
-Preparation and implementation of program activities such as, logistical arrangements for participants, taking care of the bookings ofasmall food production facility, etc.
-Assist with preparing required materials for Entrepreneurship & Food Production Trainings.
-Maintain documents pertaining to the project management team.
-Perform duties assigned by the management and project lead such as following up with participants.
-Supervise the usage of product facility including raw materials and machineries.
-Supervise the participants to ensure that they implementaset standard operating procedures and guidelines for food production.
-Keep records of all information related to the project for documentation, clarification and presentation to management.
-Fresh graduate or diploma holder or undergraduate student
-Able to use Microsoft office and G-suite
-High level of ethics, empathy and dependability
-Good communication skills Passionate about entrepreneurship isaplus
-Able to travel near Lashio (15 mins drive from downtown), with an own transportation isaplus (fuel costs will be covered)
Please submit your resume to bhonemyat.kyaw@impacthub.net or aung.pyae@impacthub.net no later than 28 February 2022. For more information and details please contact 09 973474141 or 09761093318.